ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ့်… – PVTV Myanmar
ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ့်
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို မြန်မာ့မြေပေါ်မှ အမြစ်ဖြတ်သုတ်သင်မယ့်
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေရဲ့ လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေမှုမှတ်တမ်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 16K Share – 2108
Oo Tun Oo says:
2021-07-06 at 9:49 PM
ပိုပီး အား႐ွိလာေစခ့ဲတယ္ PDF
PDF သူရဲကောင်း တို့ တိုက်ပွဲတိုင်း ကို အောင်မြင်စွာ ဆင်နွဲ နိုင် ကြပါစေ
အရေးတော် ပုံအောင် ရမည်
2021-07-06 at 9:50 PM
အရမ်းကြိုက်တယ် လက်နက်ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်ဖို့ ပညာရှင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
Li Weiyang Sun Moon says:
2021-07-06 at 9:51 PM
We stand with NUG PDF
Kyay Mone Soelwin says:
လေးစားချစ်ခင် မြတ်နိုးရသော ပြည်သူ့ရင်သွေး လေးများ။
Hnin Si Lwin says:
2021-07-06 at 9:53 PM
2021-07-06 at 9:55 PM
တိုက်ပွဲတိုင်း အခက်အခဲမရှိ အထိအခိုက်မရှိပဲ အောင်မြင်ပါစေ။ မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေး အမြန်ဆုံးရပါစေ။
Khitthit May Khitthit says:
2021-07-06 at 9:59 PM
ပြည်သူ ချစ်သော PDF များတိုက်ပွဲတိုင်းနိုင်ပါစေ။ဘေးကင်းကြပါစေ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။
ဟိုဘက်အဖွဲ့ ပိုပီး ပြင်ဆင်မှုကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်အောင် ကို့ဘက်က ဘာရှိတယ်ဆိုတာ သိအောင် လိုင်းပေါ်တင်တာလားဗျာ
2021-07-06 at 10:02 PM
ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ vitamin လေး​တွေ ကျန်းမာ ဘေးကင်း​အောင်မြင်ပါ​စေ 🙏🙏
Hnin Thae Ngone says:
2021-07-06 at 10:05 PM
ဘေးကင်း ကျန်းမာပြီး တိုက်ပွဲတိုင်း အောင်မြင်ပါစေ ပြည်သူ့သားသမီးလေးများ
Nway Oo Yadanar says:
ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ပေးမဲ့ ပြည်သူ့သူရဲကောင်းများ
Yi Yi Mon says:
2021-07-06 at 10:08 PM
PDFလေးတွေ ကျန်းမာပါစေ ဘေးကင်းပါစေ အောင်မြင်ပါစေ အရေးတော်ပုံအောင်မည်
Soe Myat Mon says:
2021-07-06 at 10:10 PM
ပြည်သူ့တပ်မတော် ဘေးကင်းကင်းနဲ့ ပြန်ဆုံကြမယ်နော် 💪🏻💪🏻💪🏻🙏🙏🙏
Kyaw Minthway says:
ငါတို့ရဲ့ ညီလေး ညီမလေးတွေကို ယုံကြည်မှု့အပြည့်နဲ့ အားကိုးပ့တယ် အောင်မြင်ပါစေ
2021-07-06 at 10:13 PM
Mahar Nwe says:
2021-07-06 at 10:16 PM
ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကြီး အင်အားကြီးမား၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူများအား အမြန်ဆုံး ကယ်တင်ကြပါစို့
Ko Peter says:
ရေ ရှိ ရင် ငါး ရှိ မယ်
ပြည်သူ ရှိရင် PDF ရှိတယ်
PDF ညီအစ်ကိုများ ဘေးကင်းပါစေ
A M Htun says:
So proud for you all.
တပ်မတော်အသစ်မှာ ရာထူးရာခံ ကြီးကြီးတွေရကြပါစေ
Shan Ma Lay says:
2021-07-06 at 10:35 PM
တိုက်ပွဲ တိုင်း အောင်မြင်ပါစေ
2021-07-06 at 10:36 PM
အနစ်နာခံပြီး ကြိုးစားပေးနေတဲ့ တယောက်ချင်းစီကို သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Castro Geuvara says:
Keep moving forward. Men!!
Would like to try like this me too.plz
2021-07-07 at 12:09 AM
M 16 အသစ်တွေကိုမြင်ရတော့အားရှိတယ်ဗျာ ၊ပြည်သူ့ရင်သွေး PDF များ အန္တရာယ်ကင်း၍ တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်မြင်ကြပါစေ🙏🙏🙏
Chloe Crown says:
2021-07-07 at 12:22 AM
ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ယူရပါတယ္ ကေလးတို႔ေရ
ဖက်ဒရယ်ဒီမို ကရေစီတပ်မတော် says:
2021-07-07 at 5:44 AM
ပြည်သူ ကာကွယ်ရေး PDF တပ်မတော်သားများ အောင်ပွဲ ပေါင်းများစွာ အောင်ပွဲ ရပါစေ ဘေးကင်းရန်ကင်း ကြ ပါစေ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
SnowQueen SnowQueern says:
2021-07-07 at 7:37 AM
လေးစား ဂုဏ်ယူပါတယ်အကိုတိုရေ 5တင်းနော် အားလုံးဘေးကင်း ရန် ရှင်းကျမ္မာချမ်သာကြပါစေ
ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်များအားလုံး ကျန်းမာပါစေ၊ဘေးရန်ကင်းပါစေ၊တိုက်ပွဲတိုင်းကို အခက်အခဲမရှိအောင်မြင်ပါစေ🙏
Hnin Nway Oo says:
2021-07-07 at 9:29 AM
တကယ်ကိုရင်ထဲက​နေလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ​ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကြည့်​နေရင်းမျက်ရည်​တွေ​တောင်ကျမိပါတယ်။ ​တော်လှန်​ရေးပြီးသွားရင် သူတို့ရည်မှန်းချက်​တွေဆီ ပြန်သွားကြမယ့် နိုင်ငံ့မျိုးဆက်သစ်က​လေး​တွေရယ်။ တိုက်ပွဲတိုင်း ​ဘေးမသီရန်မခပဲ​ အောင်မြင်ပါ​စေ။ တရား​သောစစ် တိုက်တိုင်း​အောင်ပါ​စေ။
Daw Phyu Phyu Kyaw says:
ကိုထွန်း မြန်မာ says:
2021-07-07 at 2:20 PM
ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ချင်တယ် သိတဲ့လူများ cb မှာ လာပြီး ဆက်သွယ်ပေးပါ
Kalayar Myint Thu says:
2021-07-07 at 7:35 PM
NUG အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ဝန်ထမ်းအဖြစ် အုတ်တချပ် သဲတပွင့်အ​နေနဲ့ပါဝင်ကူညီချင်ပါတယ်ရှင့်🥰🥰🥰
2021-07-08 at 7:11 AM
တိုက်ပွဲတိုင်း အောင်ရမည်။ အရေးတော်ပုံ အောင်ကိုအောင်ရမည်။
Moe Thinzar Win says:
2021-07-08 at 7:56 PM
ကျွန်မတို့ချစ်သော ပြည်သူ့တပ်မတော် PDF များ ကျန်းမာကြပါစေရှင့် 🥰🥰🙏🙏🙏
Thae Su Su says:
2021-07-10 at 8:13 PM